Publications of the University of Valencia - World Book
Publications of the University of Valencia
Novambra 24, 2021 ny Garcia Lopez, Sonia
Aiza no hividianana ny boky Espaina is us? Momba ny inona ny boky Espaina? Ny ady an-trano Espaniola dia tonga amin'ny fotoana manan-danja amin'ny fametrahana lamina ara-jeopolitika vaovao. Eo amin'ny sehatry ny kolontsaina audiovisual, andiana fanavaozana ara-teknolojia no nandray anjara tamin'ny fanatontoloana haingana, izay nanafaingana ny… hamaky bebe kokoa
Sokajy boky Tags Publications of the University of Valencia Leave a comment
Novambra 12, 2021 ny Palmer, Bryan D.
Aiza no hividianana ny boky EP Thompson nataon'i Palmer, Bryan D.? Inona ny boky EP Thompson? Ny bokin'i Bryan D. Palmer momba ny fiainana sy ny asan'i Edward Thompson, iray amin'ireo mpahay tantara miteny anglisy manan-danja indrindra tamin'ny taonjato faha-XNUMX, dia fanomezam-boninahitra manokana ho an'ny mpanoratra ny… hamaky bebe kokoa
Osteoarticular fandidiana pathology
Jolay 6, 2021 ny worldbook
Aiza no hividianana ny boky Osteoarticular Surgical Pathology? Inona ny boky Osteoarticular Surgical Pathology? Taorian'ny famoahana, ao amin'ity fanangonana ity, ny boky mitovitovy amin'izany, mitondra ny lohateny hoe Generalitats, izay miresaka momba ny lafiny ankapobeny sy tena ilaina amin'ny nosologies traumatic, ity boky ity dia mifantoka amin'ny ratra mahatsiravina izay misy fiantraikany amin'ny hazondamosina sy ny rantsambatana ambony. … hamaky bebe kokoa
Rondalles Valencian malaza
Jolay 5, 2021 ny worldbook
Aiza no ahitana ny boky Rondalles populars valencianes? Inona no atao hoe boky Rondalles populars valencianes? Sambany tao anaty boky iray, ny mpamaky dia manana tantara mihoatra ny roan-jato eo am-pelatanany navondrona ho andian-dahatsoratra, voasokajy araka ny fepetra iraisam-pirenena ary hazavaina amin'ny tontolon'ny folklore manerantany. Fitambarana tantara maneho ny fahamaroan'ny… hamaky bebe kokoa
Fasisma sy Francoism
Jolay 4, 2021 ny Iza, Ismael
Aiza no misy ny boky Fasisma sy Francoism? Momba ny inona ilay boky Fasisma sy Franco? Ao amin'ireo andrana voaangona ato amin'ity boky ity, dia nisy dia natao tamin'ny alàlan'ny fivoaran'ny fandalinana momba ny fasisma iraisam-pirenena, toy ny fivoaran'ny fasisma tany Espaina hatramin'ny niandohany ka hatramin'ny fampidirana azy tao amin'ny jadona Franco. Ny taloha… hamaky bebe kokoa
Vaomieran’ny mpiasa sy ny famoretana nataon’i Franco
Jolay 4, 2021 ny Gomez Roda, Alberto
Aiza no misy ny boky Mpiasan'ny mpiasa sy ny famoretana Francoist an'i Gómez Roda, Alberto? Inona ilay boky hoe Vaomieran'ny mpiasa sy ny famoretana Francoist? Ity boky ity dia momba ny fananganana indray ny hetsiky ny mpiasa ao Valencia sy ny hetsika famoretana nanjo ny fitondrana Franco teo anelanelan'ny taona XNUMX sy XNUMX… hamaky bebe kokoa
Fijoroana vavolombelona iray hafa
Jolay 4, 2021 ny Jimenez, Faust
Aiza no ahitana ny boky One more testimony of Jiménez, Fausto? Momba ny inona ilay boky hoe One More Testimony? Ity taom-pahatsiarovana ara-tantara ity dia fotoana iray hanasongadinana ireo fijoroana vavolombelona samihafa momba ny fahasahiranana niainan'ny ampahany betsaka tamin'ny Espaniola izay voatery nanao sesitany taorian'ny ady an-trano. Amin'ity tranga ity dia ireto ny fahatsiarovana... hamaky bebe kokoa
Ny varotra amin'ny fianarana any amin'ny Oniversite: fanoloran-tena miovaova
Jolay 4, 2021 ny Hernández Pedreño, Manuel / Llopis Goig, Ramón / Navarro Susaeta, Pablo / Tejerina Montañana, Benjamin
Aiza no hividianana ny boky Ny asa fianarana any amin'ny Oniversite: fanoloran-tena miovaova? Inona no atao hoe boky Ny asan'ny fianarana any amin'ny Oniversite: fanoloran-tena miovaova? Ao anatin'ny fandaharam-pianarana sy fandalinana ho fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana ambony sy ny asan'ny mpampianatra eny amin'ny oniversite, ny… hamaky bebe kokoa
Vehivavy milisy ao amin'ny Andry vy
Jolay 4, 2021 ny Girona Rubio, Manuel
Aiza no hividianana ny boky Una militiana en la Columna de Hierro de Girona Rubio, ManuelIBD? Momba ny inona ilay boky hoe Militiawoman in the Iron Column? Ao amin'ity boky ity, ny mpamaky dia hahita ny fihetsiketsehana miaraka amin'ny porofo tsy azo lavina ny tsy fananan-tsiny an'i María, tanora anarchista izay, ho fiarovana ny Repoblika sy ny idealy,… hamaky bebe kokoa
Fepetra sy fampiasana ny fiteny filozofika
Jolay 3, 2021 ny Quintas Alonso, Guillermo
Aiza no ahitana ny boky Terms and use of philosophical language by Quintás Alonso, Guillermo? Inona no dikan'ny boky Terms and use of philosophical language? Ny fisaintsainana ny votoatin'ny fampiasana samihafa ny teny iray dia manan-danja amin'ny tenany ary manan-danja lehibe amin'ny fanabeazana noho ny zava-misy fa fotoana tena ilaina izany ... hamaky bebe kokoa
pejy1 pejy2 ... pejy43 manaraka →